ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
မည်သူသည်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာအမှုအတွင်းဌာနတွင်းရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုခံယူခွင့်ရှိသနည်း။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်နှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်းရုရှားပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အာဏာပိုင်များတွင် -
ငါပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ဆောင်းပါး 188 Code ကိုအတွက်သက်သေအဖြစ်ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်သည် RF ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ အရသက်သေအဖြစ်ဆင့်ခေါ်ခံရသည်။ မင်းသွားချင်ရင်သွားပါ သင်မသွားချင်ပါ၊ သို့သော်သူတို့သည်သင်၏ drive ကိုကြေငြာပြီး၎င်း၏အကူအညီဖြင့်အတင်းအဓမ္မယူဆောင်လာနိုင်သည်။
သင် "ထောင်ချ", "လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်" နှင့်သူတို့တစ်ပြိုင်နက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဘယ်လိုခြားနားချက်ကိုရှင်းပြနိုင်ပါသလား?
သင် "ထောင်ချ", "လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်" နှင့်သူတို့တစ်ပြိုင်နက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဘယ်လိုခြားနားချက်ကိုရှင်းပြနိုင်ပါသလား? တိုတိုပြောရရင်ထောင်ချခံရပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ဟာတစ်နှစ်ကြာလက်ကောက်နှင့်သူအတွက်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုဝတ်ဆင်ကြလိမ့်မယ် ...
ခိုးမှု၊ ခိုးမှု၊ ခိုးမှု၊ လုယက်မှုနှင့်လုယက်မှုများအကြားတရားဝင်ကွာခြားချက်များမှာအဘယ်နည်း။ ကွဲပြားခြားနားမှုများသည်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ပုံ၊ ပြင်းထန်မှုနှင့်အကျိုးဆက်များဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါတွေအားလုံးကတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူဖို့နည်းလမ်းတွေပါ
အကျဉ်းသားချင်းများပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသောပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားအင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကြားသိခဲ့ရသည်။ ru လူတွေကဘယ်အတိုင်းအတာအထိနုံကြသလဲ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ktozh ကဒီအချက်အလက်တွေကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာထုတ်ပြန်လိမ့်မယ်။ Sasim ၏ကိုယ်ကျင့်တရားများလော။ ယေဘုယျအားဖြင့် ...
မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကဘာလဲ။ အနုပညာ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ၁၄၆ ။ မူပိုင်ခွင့်နှင့်ဆက်စပ်သောအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ခြင်း။ အပိုင်း ၁။ ဤလုပ်ရပ်သည်စာရေးသူအားအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေလျှင်၊
တစ်ဦး bunt Code ကိုအသုံးပြုပြီးပြစ်မှုများ၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကိုကူညီပါ
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ခေါင်းစည်းကိုစစ်မှုထမ်းခြင်းဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှု၊ အထူးစစ်မှုထမ်းများ၊ စစ်မှုထမ်းများ - အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူအသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသောပြစ်မှုကိုဖျက်သိမ်းရန်ကူညီပါ။ ရှိသည်…
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၆ အရ၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ (၉၉) သည်သံသယရှိသူသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းစွပ်စွဲခံရသူအားကာကွယ်တားဆီးရေးနည်းလမ်းတစ်ခုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင် ...
၀ င်ငွေပုန်းအောင်းရန်နှင့်၎င်းတို့အပေါ်အခွန်မပေးဆောင်ရန်အတွက် LLC အတွက်အဘယ်အပြစ်ပေးခံရသနည်း။ ဒဏ်ငွေအခွန်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုအတွက်အခွန်ထမ်း၏တာဝန်ဝတ္တရားချက်ချင်းတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ အခွန်ပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားသည်။
သငျသညျမတိုင်မီ drives တွေကိုမရှိလျှင်သင်မှတ်ပုံတင်မထားဘူးဆိုရင်ဆေးခြောက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအဘို့အဘယ်သို့အပြစ်ပေးနိုင်သလဲ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းတွင်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာတာ ၀ န်မရှိပါ။ အုပ်ချုပ်ရေး :: အပိုဒ် ၆.၉ ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု ...
ရှေ့ကနေလက်နက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်အဓိက parameters တွေကိုဘာတွေလဲ?
လက်နက်များကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အဓိကအချက်များကားအဘယ်နည်း။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပစ္စည်းများကိုအမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိစ္စကိုမှုခင်းစစ်ဆေးမှုသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၏ရလဒ်များအပေါ်တွင်သာဆုံးဖြတ်သည် (ဥပမာ - ၁၊ ၂) ။ ကျွမ်းကျင်သူများကလမ်းပြသည်
ဘယ်လိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းသလဲ? စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့အမှု၏သဘောသဘာဝပေါ်မူတည်။ ။ အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးဖွဲ့စည်းမှုဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့ကြောင့်အချို့သောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူစုံစမ်းစစ်ဆေးအမျိုးမျိုးသောကျွမ်းကျင်သူများ, စစ်ဆင်ရေးန်ထမ်းအရေအတွက်, mater- နည်းပညာနည်းလမ်းများ ...
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကိုခြိမ်းခြောက်မှုအတွက်တရား ၀ င်ပြစ်ဒဏ်ကဘာလဲ။ အပိုဒ် ၁၁၉ လူသတ်မှု၊ ထို့အပြင်၊ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကသင့်အားဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်သင့်အားဖိအားပေးပါက ...
သင် steroids အသုံးပြုသောကြောင့်ထောင်ကျပါသလား ရုရှားရာဇ ၀ တ်မှုပုဒ်မ ၂၃၄ ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အစွမ်းထက်သောသို့မဟုတ်အဆိပ်ဖြစ်စေသောအရာများတရားမဝင်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုပါ။ အပိုင်း ၁ တရားမဝင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ရယူခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးတွင်တရားသူကြီးမည်မျှရှိသနည်း။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီ freeloader ၏ 19 အဖြစ်အများအပြားအဖြစ်ရှိပါတယ်။ ၁၉၉၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းတရားရုံးမှတရားသူကြီး ၁၉ ဦး ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အဘယ်အရာကို oboznochaet လက်တော်စာရွက် V ကိုပေါ်တက်တူး
အရှေ့တိုင်းအနုပညာနှင့်အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်တက်တူးများတွင်အနီရောင်အပင်၏အထိမ်းအမှတ်သည်လက်မောင်းပေါ်ရှိအရွက်၏တက်တူးထိုးခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ၎င်းသည် (တရုတ်နှင့်ဂျပန်တွင်) ချစ်သူများ၏အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။
အသနားခံစာကဘာလဲ? စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သက်သေများအားစစ်ဆေးမေးမြန်းရန်တောင်းခံခြင်းသင်သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည့်အခါသင်လုပ်နိုင်သည် - ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ရာဇ ၀ တ်မှုပုဒ်မ ၅၆ တွင်ကြည့်ပါ။ သက်သေတစ် ဦး သည်အောက်ပါအခွင့်အရေးများရှိသည် -
စစ်ဆေးမှုမတိုင်ခင်စစ်ဆေးမှုဆိုတာဘာလဲ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအားလုံးတွင်လိုအပ်သည်။ စစ်ဆေးမှုမတိုင်မီစစ်ဆေးခြင်းသည်ကိစ္စအားလုံးတွင်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လူတစ်ယောက်၏အလောင်းကိုနှလုံးသို့မဟုတ်ကျည်ဆန်များဖြင့်ဓားဖြင့်တွေ့ရှိပါက ...
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ၊ ဆောင်းပါး ၂၂၈/၁ အပိုင်း ၄ ... ပထမဆုံးအကြိမ်သူတို့မပါ ၀ င်ဘဲအသုံးမပြုလျှင်ဘယ်လောက်ပေးနိုင်မလဲ။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ၊ ပုဒ်မ ၂၂၈/၁ အပိုင်း ၄ ... ပထမဆုံးအကြိမ်သူတို့မပါ ၀ င်ဘဲအသုံးမပြုလျှင်ဘယ်လောက်ပေးနိုင်မလဲ။ အနုပညာအပိုင်း 228 ။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၂၂၈.၁ တွင်ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်မှအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသည်။
ထိုအ ... အားလုံးအတူတူပါပဲ, သငျသညျအဘယျသို့ထင်ပါသလဲ, seductive Yulia Sidorenko များအတွက်ယ Eugene Podbutskogo ထားကြလိမ့်မည်နည်း
ပြီးတော့ ... အားလုံးအတူတူပါပဲ, သင်ထင်ပါက Yulia Sidorenko ဖြားယောင်းမှုအတွက် Yevgeny Podbutsky ထောင်ချလိမ့်မည်နည်း ၁၃ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူလေးမွေးဖွားလာသူသည်အပြစ်ဒဏ်မှလွတ်မြောက်လိမ့်မည်။ မိခင်ဖြစ်သူကယုံကြည်သည်။ ငယ်ရွယ်သောမိခင်က ...
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,990 စက္ကန့်ကျော် Generate ။